६ प्रदेशका ४७ सांसद् एकीकृत समाजवादी पार्टीमा, कुन प्रदेशमा कति ? – GALAXY
६ प्रदेशका ४७ सांसद् एकीकृत समाजवादी पार्टीमा, कुन प्रदेशमा कति ?
काठमाडौँ । बिहीबारसम्म गण्डकी प्रदेशबाहेक ६ वटा प्रदेशका ४७ जना एमाले सांसद्ले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा सनाखत गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १२ सांसद् एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् ।